२ नम्बर प्रदेशमा राजपाको शक्तिः किन तालमेल चाहन्छन् ठूला दल ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National २ नम्बर प्रदेशमा राजपाको शक्तिः किन तालमेल चाहन्छन् ठूला दल ?
२ नम्बर प्रदेशमा राजपाको शक्तिः किन तालमेल चाहन्छन् ठूला दल ?
Marganugamidaily प्रकाशित समय 6:50:00 PM
काठमाडौं, १७ साउन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावमा जाने निश्चित भइसकेको छैन । तर राजपासँग तालमेल गर्ने दलहरुले रणनीति बनाइसकेका छन् । तीन ठूला दलदेखि साना दलहरुले समेत राजपा नेपालसँग दुई नम्बर प्रदेशमा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महोत्तरीको बर्दिवासमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै स्थानीय तहको चुनावमा राजपा नेपालसँग तालमेल हुने धारणा राखेका थिए । राजपा नेपाललाई पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा सहभागि गराउने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै उनले सो दलसँग तालमेल हुने स्पष्ट पारेका थिए । तर, दुई नम्बर आधार क्षेत्र भएको राजपा नेपाल तराई मधेशमा आन्दोलन गरिरहेको छ । संविधान संशोधनलगायतका मागहरु पूरा नभएसम्म चुनावमा सहभागि नहुने अडान अडानमा छ , राजपा ।
तालमेल किन ?
राजपा नेपालसँग चुनावमा तालमेल गरिए सोचेभन्दा बढी मत परिणाम आउने विश्वास दलहरुको रहेको छ । अर्को कुरा राजपा नेपालसँग तालमेल गरेर जाँदा मधेशमा विरोध हुने सम्भावना नरहने भएकाले पनि सो प्रयास गरिएको बुझिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको काँग्रेस पार्टीले पनि राजपा नेपालसँग सम्बन्ध बनाएर नै चुनावमा सहभागि हुने रणनीति बनाएको छ । मधेशमा मधेशवादी दललको जन्मले गर्दा सबभन्दा घाटा काँग्रेसलाई भएको छ । मधेशलाई काँग्रेसको भोट बैंक मानिन्छ । अरु प्रदेशमा भएको क्षतिको पूर्ति दुई नम्बर प्रदेशबाट गर्ने रणनीतिमा कांग्रेस रहेको छ । र, त्यो त्यतिकै सम्भव छैन, राजपा नेपाललगायतका मधेशी दलसँग मिलेर त्यो सम्भव हुने कुरा काँग्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं कृषि मन्त्री रामकृष्ण यादवले राजपा नेपालसँग तालमेल गरेर नै जाने निर्णय नभएपनि आवश्यक पर्ने ठाउँमा तालमेल गर्ने बताए । मधेशमा जित्नका लागि काँग्रेस पार्टीले जस्तोसुकै नीति अपनाउन पनि तयार भएको साउन ५ गते काठमाडौमा भएको दुई नम्बर प्रदेशको भेलामा नेता विमलेन्द्र निधिले बताएका थिए ।
उनले मधेश काँग्रेसका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको बताउँदै अन्य दलहरुसँग तालमेल गरेर भएपनि अगाडि बढ्ने बताका थिए । मधेशमा आलोचना र अवरोध खेपिरहेको एमाले पनि राजपा नेपाललगायत मधेशवादी दलसँग तालमेल गर्न तयार रहेको देखिन्छ । मधेशका इन्चार्ज एवं सांसद सत्यनारायण मण्डलले मधेशमा राजपा नेपाललगायत अन्य मधेशवादी दलसँग तालमेल गर्न एमाले तयार रहेको बताए । यद्यपी उनले एमाले मात्र तयार भएर नहुने भन्दै मधेशवादी दल पनि तयार हुनुपर्ने बताए । केन्द्रस्तरमा मधेशवादी दलसँग यस विषयमा हालसम्म कुनै कुराकानी नभएपनि जिल्ला स्तरमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मधेशमा एमालेलाई एक नम्बर बनाउनका लागि आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्नेछौं ।’यता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालको केही दिन पहिले बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै यो विषयमा छलफल भएको छ । राजपा नेपालसँग तालमेल गरेर चुनावमा जाने विषयमा छलफल छलफल भएको एक नेताले बताए ।
अध्यक्ष यादवले नै सो प्रस्ताव बैठकमा राखेको फोरम नेपाल स्रोतले जनाएको छ । रिपोटर्स क्लवको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा समेत यादवले स्थानीय तहको चुनावमा राजपा नेपालसँग तालमेल हुन सक्ने संकेत गरेपनि त्यस विषयमा औपचारिक कुराकानी नभएको बताएका थिए ।
राजपा नेपाल पनि चुनावमा सहभागि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सो दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिका कारण केही दुरी बढेको भएपनि समझदारी गरेर चुनावमा सँगै जाने धारणा राखेका थिए । नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले स्थानीय तहको चुनावमा राजपा नेपाल र फोरम नेपालसँग तालमेल गरेर चुनावमा गयो भने देशकै तेस्रो शक्ति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम, राजपा नेपाल र फोरम नेपाल एकसाथ चुनाव लड्यो भने मधेशमा एक नम्बरको पार्टी हुन्छ नै देशकै तेस्रो ठूलो दल बन्छ ।’
चुनावमा तालमेल गर्नका लागि आफूले ती दलका नेताहरुसँग कुराकानी गर्ने समेत उनले बताउँदै भने, ‘फोरम नेपालले चुनावमा भाग लिइसकेको छ । राजपा नेपालले अहिले पनि चुनावमा भाग लिन्छ कि लिदैन टुगों लागेको छैन ।’
मधेसमा राजपाको शक्ति
चुनावमा भाग लिने कि नलिने टुगों नलागेको दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने दलहरुको रणनीति बनिरहेको बाट नै राजपा नेपाल मधेशमा प्रभावशाली रहेको देखिन्छ । एक समय थियो– मधेशी मोर्चाको आन्दोलनका कारण माओवादी केन्द्र, एमाले र काँग्रेसलाई मधेशमा प्रवेश निषेध नै थियो । मधेशमा उनीहरुको सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प थियो ।
मधेशी मोर्चा विभाजित भएर राजपा नेपाल गठन भएपछि आन्दोलन कमजोर भयो र अहिले सबै दलले निर्धक्क रुपमा मधेशमा कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डल सदस्य राजकिशोर यादवले राजपा नेपालविना दुई नम्बर प्रदेशमा चुनावको माहोल नबनिरहेको अवस्थामा ठूला दलका नेताहरुले रणनीतिक ढंगबाट यी कुराहरु बाहिर ल्याएको प्रतिकृया दिए ।
तराई मधेशका जनताहरु तीन ठूला दललगायत फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक दलहरुप्रति आक्रोशित रहेको भन्दै उनले त्यो आक्रोशलाई साम्य पार्नका लागि जानी जानी ती दलका नेताहरुले यस्तो कुराहरु बाहिर ल्याएको उनको तर्क छ । उनले ठूलादेखि साना दलले राजपा नेपालको आडमा मधेशमा छिर्ने प्रयास गरेको पनि आरोप लगाए ।
यस्तै उनले राजपा नेपाल चुनावमा जाने नजाने सुनिश्चित नभएको अवस्थामा तालमेलको विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको समेत बताए ।